လင်းနစ် - Slow Motion [2014 Single] - Mg Shan Lay
Home Album Single လင်းနစ် လင်းနစ် - Slow Motion [2014 Single]
လင်းနစ် - Slow Motion [2014 Single]
5:03:00 PM Album, Single, လင်းနစ်,
ကျနော်အပါအဝင် အဆိုတော် တော်တော်များများကြုံရတဲ့မေးခွန်းတစ်ခု
အစ်ကို Single ခွေ ဘယ်တော့ထွက်မလဲ ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းကို ပရိတ်သတ်တွေဆီကရော မီဒီယာတွေကပါ ခဏခဏကြားရတော့ တစ်ခုလောက်ပြောချင်လာတယ်
ဒါကလည်းကျနော်တို့ ဂီတသမားတွေဘက်က စမှားတဲ့အမှားပါ
ဘယ်သူကစပြောလိုက်လဲတော့မသိဘူး တစ်ကိုယ်တော်ကို Single အခွေရယ်လို့
တစ်ကယ်တော့ Single ဆိုတာ တစ်ကိုယ်တော်အခွေကို ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး
Single ဆိုတာ Album အသစ်တစ်ချပ်မထွက်ခင်မှာ အဲ့ဒီ့ Album ထဲက အကောင်းဆုံး(သို့) စိတ်ဝင်စားမယ်လို့ ယူဆရတဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ်တည်းကို အခွေထုတ်ရောင်းတာတို့ အွန်လိုင်းမှာရောင်းတာတို့ကိုပြောတာပါ
ဥပမာ - Maroon5ရဲ့ V Album မထွက်ခင် Map ဆိုတဲ့ Single ကိုအရင်ရောင်းခဲ့ပါတယ်
တစ်ခါတစ်လေ Single တစ်ပုဒ်နဲ့ မလုံလောက်ဘူးလို့ယူဆရင် နောက်ထပ် Single တစ်ပုဒ်ထပ်ထုတ်ပါတယ်
Maroon5ကအခွေသစ်ထွက်မယ်ဆိုရင် Maroon5New Album လို့ပဲ သုံးကြတာပါ
(ကျနော်တို့ဆီမှာက အဆိုတော်တွေအများကြီးနဲ့ အခွေလုပ်ကြတဲ့ ယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုကြောင့် တစ်ကိုယ်တော်အခွေဆိုတာလည်း သီးသန့်သုံးနှုံးရတဲ့ စကားလုံးတစ်ခုဖြစ်နေတာပါ )
One Direction တို့ EXO တို့လို့ Boy Band တွေကနေ တစ်ယောက်ယောက်က ခွဲထွက်ပြီး အခွေထုတ်မယ်ဆိုရင်တော့ Solo Album လို့ သုံးကြပါတယ်
ဘာရယ်မဟုတ်ပါဘူး ကြာတော့ အမှားက အမှန်ဖြစ်သွားမှာစိုးလို့ပါ
နောက်ပြီးကျနော့်ရဲ့ Single သီချင်းသုံးပုဒ်လုံးကို ပြန်တင်ချင်လို့ အကြောင်းရှာတာလည်းပါပါတယ်ဗျာ
အဓိက ကတော့ အဲဒါပါ
ဒီပို့စ်လေးကို Share ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ ကျနော့်အတွက်မွေးနေ့လက်ဆောင်ပါပဲ
Download Now 1st Single အတိတ်ရဲ့အရိပ်
And also Download 2nd Single နင်ခွင့်လွှတ်ပါ >>>>>http://www.mediafire.com/…/imkua2chv…/Nin_Kwint_Lhut_Par.mp3
And also Download 3rd Single ရိုးသားမိတဲ့အမှား
Credit - Linnith Facebook
Tags # Album # Single # လင်းနစ်
Labels: Album, Single, လင်းနစ်
Thetlwin Oo October 28, 2014 at 6:13 PM
hi bro ညီနဲ့အဆက်သွယ်ပြန်ရပြန်ပြီး ဒီထက်အောင်မြင်ပါစေခင်ဗျား ကိုရှမ်းလေး အရမ်းကိုလေးစားပါတယ် bro ရှမ်းလေး ခင်ဗျား
Shan Lay October 30, 2014 at 12:19 PM
​ကျေးဇူးတင်​ပါတယ်​ Thetlwin Oo ​ရေ . . . အမြဲတမ်းအား​ပေးတဲ့အတွက်​ . . . :-)
Thetlwin Oo October 31, 2014 at 6:03 PM
ဟုတ်ကဲ့ပါ ဘာဖြစ်ဖြစ်အခုလိုပြန်အဆက်သွယ်ပြန်ရတာဝမ်းသာပါတယ် ဒီထက်အောင်မြင်ပါစေ ဘာဝဆက်တိုင်း ပါ ခင်ဗျား ကိုရှမ်းလေး ဗျာ